Banaabaxayaasha Yemen oo dalbanaya in la xiro saraakiisha dawlada Cali C/lla Saalax. – SBC
Banaabaxayaasha Yemen oo dalbanaya in la xiro saraakiisha dawlada Cali C/lla Saalax.
Dhalinyarada kacdoonka ee Yemen,gaar ahaana hogaaminayay banaabaxyadii mudadan ka socday dalkaasi ayaa dalbaday in lasoo xiro saraakiisha ciidamada Amaanka ee dowlada Saalax,waxaana ay ku eedeeyeen saraakiishaasi in ay ka dambeeyaan dilka banaabaxayaal badan oo ku dhintay mudaharaadyada isbadal doonka ah.
Sidoo kale dhalinyarada kacdoonka waxaa ay ku baaqeen in la dhiso xukuumad KMG taasi oo ay ka maran yihiin saraakiisha la shaqeysa Nidaamka Dowlada Cali C/lla Saalax.
Ma jirto go aan rasmi ah oo laga soo saaray sii joogitaanka iyo weliba ka tagitaanka madaxweyne Saalax talada dalka Yemen,laakiinse waxaa jira warar si hoose layskula dhex marayo taasi oo sheegaysa in Madaxweyne ku xigeenka oo haatan talada sii haya uu iscasilayo.
In kabadan 1,000 ayaa ku dhintay,tiro intaasi ka badana waa ay ku dhaawacantay tan iyo inta ay bilowdeen banaabaxyada isbadal doonka ah ee dalkaasi Yemen.
Shacabka banaabaxaya waxaa ay ku adkaysanayaan in ay maxkamad soo taagayaan Madaxweyne Saalax iyo weliba saaraakiisha Dowladiisa,iyagoona ku eedeynaya dilka banaabaxayaal badan oo ku dhintay mudaaharaada isbadal doonka ah.